डा. सिके राउतको जीवनमाथि फिल्म बन्ने – Online Marg
शनिवार ,कार्तिक २ २०७६
डा. सिके राउतको जीवनमाथि फिल्म बन्ने
Posted on Saturday, July 20th, 2019 12:04 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
मधेश अभियन्ता सिके राउतको जीवनीमाथि नेपाली फिल्म निर्माण हुने भएको छ । सिके राउत नाम जुराइएको फिल्मको मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच औपचारिक निर्माण घोषणासँगै निर्माण टिमले टीजर पनि सार्वजनिक गर्‍यो । फिल्ममा सिके राउतको भूमिका भोजपुरी फिल्मका ‘पावर स्टार’ को रुपमा परिचित परदेशी शाहले निभाउनेछन् । उनी ‘एस पी खरेल’ फिल्मबाट चर्चामा आएका थिए ।
फिल्मको घोषणा सभामा सिके राउत स्वयं उपस्थिति भएका थिए । दुई दर्जन बढी भोजपुरी फिल्मको क्याप्टेनसिप सम्हालिसकेका सन्तोष शाहले फिल्मको निर्देशन गर्नेछन् । फिल्मको कथा पनि उनी स्वयंले तयार पारेका हुन् । नेपाली, भोजपुरी र हिन्दी भाषामा निर्माण हुने फिल्मको छायांकन विरगञ्ज, जनकपुर, काठमाडौंलगायतका स्थानमा हुने निर्माता बाबुले जानकारी दिए ।
‘डा सिके राउत’ मा पुकार भट्टराई, ध्रुव कोइराला, विशाल पहारी, किरण थापा, राजिव कर्णलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहनेछ । अभिनेत्रीको भने टुंगो लागेको छैन । भदौबाट फिल्मको छायांकन सुरु हुनेछ भने आउँदो छठ पर्वमा रिलिज गर्ने निर्माण टिमको तयारी छ । अभिनेता शाहले फिल्ममा सिके राउतको भूमिका निर्वाहा गर्न पाउनु आफ्नो लागि ठूलो अवसर र चुनौती रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सिके राउत सरको बोल्ने र हिँड्ने स्टाइल कपी गर्न मैले केही दिन उहाँको संगत गरेँ । अझै १०र१५ दिन उहाँसँग बसेर सिक्नु छ । यो फिल्म मधेशको मात्र नभएर सिंगो नेपालको हो ।’ निर्देशक शाह भने अस्वस्थका कारण कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिएनन् । पवन गौतमले खिच्ने फिल्ममा रामजी लामिछाने र लिगेश भट्टराईको कोरियोग्राफी रहनेछ । बन्दे प्रसादले फिल्मको सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
रेवन्त विक्रम थापाको द्वन्द्व निर्देशन रहने फिल्मलाई कमर्शियल बनाउन सिके राउतको जीवनको ५० प्रतिशत र बाँकी काल्पनिक कथा जोडिने बताइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै राउतले यसअघि पनि मुम्बईको एक टिमले दुई पटक आफ्नो जीवनीमाथि फिल्म बनाउने तयारी गरे पनि आफ्नै कारण निर्माण हुन नसकेको खुलाए । फिल्मको टीजर हेरेपछि सन्तुष्ट देखिएका उनले मधेश आन्दोलनमा आफूले गरेको संघर्षको कथामा फिल्म बन्ने बताए ।
‘फिल्म बनाएपछि चल्नु पनि पर्छ । त्यसैले कमर्शियल बनाउन फिल्ममा केही काल्पनिक कुराहरु पनि जोडिनेछ’, उनले फिल्मलाई फिल्मकै रुपमा बुझ्न आग्रह गर्दै अगाडि भने, ‘फिल्ममा केही विवादस्पद कुरा पनि आउन सक्छन् । तर, त्यो एउटा इतिहास भइसकेको छ ।’ एउटा मान्छे किन विद्रोहमा उत्रिन्छ भन्ने कुरा फिल्ममा देखाइने उनको भनाई छ । माँ राधिका इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बन्ने फिल्मको निर्माण लागत डेढ करोड अनुमान गरिएको छ
Posted in मनोरञ्जन कुराकानीTagged डा. सिके राउतको जीवनमाथि फिल्म बन्ने
छविलाई कारवाहीको माग गर्दै मेरि बास्सैकी भुनिया मैदानमै उत्रिएपछि…(हेर्नुहोस् भिडियो)
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र जगतमा एकछत्र राज गर्दै आएका नेपाली चलचित्र छेत्
अभिनेत्री श्वेता खड्काले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको ‘कहाँ भेटिएला’बाट नेपाली फि
ज्योती मगरको अहिलेसम्म नखुलेको कुरा खुल्यो ! (हेर्नुस् भिडीयो )
बिगत ११ वर्ष देखि कलाकारितामा सक्रिय लोकगायिका ज्योति मगर यतिबेला तीजको गी
ऋषि धमलाको भन्दा पनि झन खतरनाक कुटाकुटको कार्यक्रम बाहिरियो ! (हेर्नुस् भिडियो)
चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाको चर्चित कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा नेकपा र न
प्रचण्डका नातिनीहरु एकसाथ मिडियामा, भन्छन्ः हजुरबुवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ! (भिडियोसहित)
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन�
हाँसेकै कारण डा. योगि विकासानन्द पुलिसको फन्दामा ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
मनोक्रान्ति अभियानका संस्थापक अभियान्ता डा. योगी विकासानन्दको हाँसो बढा ग�
अहिलेकी चल्तीकी नायिका प्रियंका कार्कीसँगको छोटो कुराकानी
काठमाडौँ । नायिका प्रियंका कार्की तीन दिनको लागि मुम्बई गएकी थिइन् । ‘प्रि�
जिउदैं मानिस खरानी बनाउने आलम पक्राउ प्रकरणमा गगन थापाले बल्ल मुख खोले !
महानायक अमिताभ बच्चनको स्वास्थ्यबारे अस्पतालबाट भर्खरै आयो दुःखद खबर !
अपराध गर्ने भीआईपी र भीभीआईपी भटाभट जेल कोचेर जनताको मन जित्दैं ओली सरकार
जिउदैं मानिस खरानी बनाउने आलमलाई जोगाउनमा जयबहादुर चन्दको मेनरोल !
‘१५ एसपी जसले न्यायको गुहार सुनेनन्’
इटाभट्टामा जिउँदै मानिस खरानी बनाउने आलमको बचाउ गर्दै कांग्रेस नेतृत्व मैदानमै उत्रिएपछि…
रितु भट्टराईको ‘तम्रै नाउको सिन्दुर’ बजारमा (भिडियोसहित)
एउटा तस्बिरभित्र लुकेको शिक्षा [सबैले पढौं र सक्दो सेयर गरौं]
लोकसेवाले ६ सय ८८ जना कर्मचारी माग्यो, हेर्नुहोस् विज्ञापन
लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा उपसचिव र सहसचिवको लागि विज्ञापन खोल्दै